Akhrinta maskaxda internetka > Dib-u-eegista Isha Dhabta ah
Ilaha Maskaxda wuxuu leeyahay, illaa iyo hadda, kuwa ugu fiican ee aan la hadlay. Iyagu waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn, adeegyada maskaxda ee ugu ixtiraamka badan ganacsiga. Qof kasta oo Maskaxiyan ah wuxuu maraa tijaabooyin adag iyo shahaado kahor intaan laga helin Isha Maskaxdu u oggolaaneyso inay wax aqriso. Maskaxdooda maskaxeed waxay leeyihiin liis ballaaran oo ah markhaatiyaal laga helo macaamiisha qanacsan, mana aha wax lala yaabo. Had iyo jeer waxay bixiyaan aqrin sax ah waligeyna ma dareemin in la ii qorsheeyay khiyaano Adiga ayaa horay u bixinaya kharashka aqrintaada si aadan waligaa kugu soo oogin eedeymo lama filaan ah. Cilmu-nafsiga ku jira ilaha maskaxda ayaa runtii mudan in la hubiyo. In ka badan 25 sano kahor Ilaha Maskaxda waxay ku dhiibtay akhriskeedii ugu horreeyay ee maskaxeed taleefan. Hadda waxay bixiyaan taleefan, sheekeysi fariin deg deg ah iyo akhrinta emaylka. Source Psychic wuxuu dhowaan soo kordhiyay astaamo qoraal oo cusub oo kuu oggolaanaysa inaad qoraal u dirto lambarka 1800 oo aad la hadasho wakiil toos ah! Isku day, kaliya u dir qoraal 866-326-0193 (qiimahaaga caadiga ah ee farriinta qoraalka ayaa dabcan lagu dabaqi doonaa).
Ganacsiga yaryar ee guuleysta waxaa lagu dhisay laba mabda 'fudud:
• Kaliya la shaqee akhristayaasha cilmi nafsi oo asal ah, oo dhab ahaan rumaysta hadiyadaha.
• U muuji macaamil kasta oo cadaalad ah.
Akhristayaashooda maskaxdu waa waxa iyaga ka dhigay. Waxay abuureen hanaan baaritaan adag oo ay kujiraan wareysiyo iyo aqrinta imtixaanka. Akhriste kasta oo mustaqbal leh waa inuu lahaadaa aqrin imtixaan oo uu ansixiyo mid ka mid ah cilmu-nafsiga la xaqiijiyay. Hadalkii hore ee ahaa “Waxay qaadanaysaa qofku inuu ogaado mid” waa run marka ay timaaddo in la garto cilmi-nafsi yaqaan xirfad leh oo gaarsiin kara akhrin macno leh
Ilaha Maskaxda wuxuu leeyahay habka ugu fiican ee baaritaanka maskaxda ee dhammaan adeegyada maskaxda ee aan isticmaalay. Qiyaastii 1 ka mid ah 20 cilmi nafsiyeed ee khuseeya Source Psychic ayaa loo oggol yahay inay wax ku akhriyaan adeegga. Nidaamka baaritaanka waa mid adag oo ku lug leh baaritaanka asalka, wareysiyo badan, waana inay siiyaan akhrin maskaxeed nool oo leh akhriste maskaxeed oo hadda la xaqiijiyay oo tijaabinaya awooddooda. Nidaamkan dartiis waxaad ugu dhawaan damaanad qaadi kartaa oo kaliya shaqooyinka ugu fiican ee cilmu-nafsiga halkaas ka shaqeeya.
Websiteka Maskaxda ah
Ilaha Maskaxda dhawaan cusbooneysiiyay boggooda waana runtii jeclahay. Aad ayey u fududahay in la isticmaalo, waxaadna ku raadin kartaa cilmi nafsi magac, ama fidinta taleefanka. Haddii aadan ogeyn midka maskaxeed ee aad dooranaysid waxaad ku kala saari kartaa liiska awoodahooda maskaxeed, haddii ay diyaar u yihiin inay wicitaano qaataan, qiimeynta macaamiisha iyo in ka badan. Source Psychic wuxuu macaamiisha u oggolaanayaa inay ka tagaan faallooyinka iyo qiimeynta si aad u aragto sida macaamiisha kale ay ugu jeclaadeen aqriskooda.
Source Maqalka waxay leedahay dalab gaar ah oo loogu talagalay macaamiisha cusub. Macaamiisha cusub waxay heli karaan daqiiqado 10 kaliya $ 10. Waxaad ka iibsan kartaa daqiiqado 30 qiimaha gaarka ah. Ugu sareyso dhammaan macaamiisha cusub waxay helayaan daqiiqado dheeraad ah oo ah 3 oo bilaash ah. Dhammaan Ilaha Maskaxda Xubnaha ayaa sidoo kale ka hela xayeysiis maalinle ah oo loogu soo diro lacag la'aan. Horgooshooda waxaa qoray qori yaqaan 'astrologer' iyo 'psychic'. Waxaan helay iyaga oo aad u caawin kara, iminka waxaan ku sugayaa emailka maalin kasta. Waxaan kugula talinayaa inaad saxeexdo warsideheeda. Wargeyskoodu wuxuu ka kooban yahay tigidhada qiimo jaban, iyo dalabyo kale oo gaar ah oo kaliya ee macaamiishu warsato. Sannadkii hore waxay i siiyeen daqiiqado bilaash ah maalintii dhalashadaydii.
Adeegga macaamiisha ayaa ah meesha Ilaha Maskaxda runtii qof kasta oo kale ayuu ka sarreeyaa. Ilaha Maskaxdu waxay ku bilaabataa iyadoo la siinayo 100% Dammaanad Qancitaan Dammaanad-qaadku wuxuu sheegayaa haddii aadan gebi ahaanba ku qanacsaneyn akhristahaaga maskaxda, ama akhriska ay ku siiyeen kaliya u wac iyaga oo waxay ku siin doonaan lacag celin buuxda ama waxay kaa caawin doonaan inaad hesho akhristaha maskaxda ka wanaagsan. Waxay bixiyaan taleefoon iyo emayl taageero 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii. Taageerada macaamiishoodu waxay ku saleysan tahay Mareykanka, waxaanan ka helay inayna ahaanin kuwo edeb badan oo edeb leh laakiin waxay dhab ahaan daneeyeen arrimaha yar yar ee aan haystay waxayna aad uga shaqeeyeen sidii ay iiga farxin lahaayeen. Waxay sidoo kale ahaayeen kuwo aqoon badan u leh cilmu-nafsiga waxayna xitaa soo jeediyeen in yar oo akhristayaal waaweyn ah inay isku dayaan. Haddii kani yahay aqriskaagii ugu horreeyay ee Maskaxeed oo kaa badbaadin kara waqti badan oo isku dayaya inaad doorato akhristaha saxda ah.